Xaflad lagu xusayo munaasabada 1Luulyo oo lagu qabtay magaalda Nanjing ee China+sawiro – SBC
Xaflad lagu xusayo munaasabada 1Luulyo oo lagu qabtay magaalda Nanjing ee China+sawiro
Posted by Webmaster on July 3, 2013 Comments
Xaflad lagu xusayo Munaasabada 1Luulyo ayaa lagu qabtay Dalka Shiinaha Gar’ahaan Magaalada Nanjing waxaa kasoo qayb galay dhamaan Ardayda Somaliyeed ee Waxbarashada ka barta Magaalada Nanjing, Ganacsato , walidiin iyo aqoonyahano.
Hadaba Madasha Xaflada 1Luulyo ayaa ugu Horayn waxaa ka hadlay Gudoomiyaha SOMESTA (Somali Medical Students Associations) Ibrahim Mohamed Noor waxaana uu sheegay in ay Maanta oo kale ay tahay Maalintii Ay xuriyada ay qaadatay konfurta Somaliya iyo midowgii gobolada konfur iyo waqooyi , isagoo kula dardaarmay ardayda somaliyed ee waxbarashada ka barta dalka shinaha in laga wada shaqeeyo hormarka dalka somaliya oo dalkii dib loogu celiya aqoonta laga bartay .
Sidoo kale Waxaa halkaasi ka hadlay Xoghayaha Arday Ajaanibka ah ee Dhigta Jaamacada South East University YUSUF SHIRE YUSUF waxaana uu ugu mahadcaliyey gudigii isku howlay qabashada xafladani 1luulyo , isagoo sidii kale hanbalyo u diray ardaydii somaliyeed ee ka qalin jibisay jamacadaha dalkani shiinaha kuwaasi oo qalin jibiyey kuliyadaha Caafimaad,telecommunication Engineering, Dhaqaala iyo Ganacsiga iyo Pharmacy .
Xafladani ayaa bilaabay 7:00 fidnimo waxaana lagu soo bandhigay dhaqanka iyo hidaha , gabayo iyo sugaan kala gadisan oo ay Dhamaan Dadki so qayb galay ay so dhaween sida Quruxda Badan loo qabtay Xaflada iyo sidii ay u soo bandhigeen ardayda somaliyed hidaha iyo dhaqankooda.
Ugu danbayntii Tartamo Cayaaraha oo lagu maamusayo munaasabada 1luulyo ayaa ardaydii loo qabtay la Gudoonsiiyey Abaalmarino , waxaana xafladaasi soo abaabulay gudiga ardayda somalida ee magaalada nanjing .